စိတ်ကျန်းမားရေး မကောင်းပင်မဲ့ ငွေ ၇ထောင်နဲ့ မြေးဖြစ်သူကို ရှင်ပြုပေးခဲ့ အဖွား - CeleLove
March 19, 2020 CeleLove Up To Date News 0
သားယောက်ကျားလေးတွေ မွေးဖွားထားကြတဲ့ အမေတွေ အဘွားတွေအတွက် သူတို့ကို ရှင်ပြုရဟန်းခံပေးလိုကြပါတယ်….ဒါပေမဲ့ တချို့က မတတ်နိုင်တာကြောင့် ရှိတဲ့ပိုက်ဆံလေးတွေ စုပြီး တစ်နေ့ကျရင် ငါ့သား ငါ့မြေးကို ရှင်ပြုပေးရမယ်ဆိုတဲ့ မိဘတွေ အဘိုးအဘွားတွေ ရှိပါတယ်…
ခုဖော်ပြချင်တာက လက်ထဲမှာ ပိုက်ဆံ ၇၀၀၀ တည်းသာရှိပေမဲ့ ချစ်ရတဲ့ မြေးလေးကို အဲဒီ မရှိမဲ့ရှိမဲ့ ငွေလေးနဲ့ ရှင်ပြုပေးခဲ့တဲ့ အဘွားတစ်ယောက်ရဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာအကြောင်းလေးဖြစ်ပါတယ် …. ။
တောင်ငူမြို့နယ်၊ ကင်းဆိပ်အုပ်စု ၊ ဖိုးနီဆိပ်ကျေးရွာမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ ရက်နေ့က အသက် ၅၇ နှစ်အရွယ် ဒေါ်စိန်တင့် ဆိုတဲ့ မုဆိုးမတစ်ယောက်က မြေးဖြစ်သူလေးကို ငွေကျပ် ရဝဝဝ နဲ့အတူ သင်္ကန်း ၁ စုံ၊ ပုတီး ၁ ကုံး ၊ သပိတ် ၁ လုံးကို ယူလာပြီး ကျေးရွာ ရာအိမ်မှူးထံသို့ လာရောက်ကာ သူ့မြေးလေးအတွက် ရှင်ပြုချင်ကြောင်း ပြောကြားလာတယ်လို့ သိရပါတယ်…။
အဲတာကြောင့် ရွာလူကြီးမှတဆင့် ကျေးရွာသားများစုပေါင်းပြီး ရှင်ပြုအလှူတော်မင်္ဂလာပွဲ ကျင်းပခဲ့ပါတယ် … ။
ရွာလူကြီးက ရွာဦးကျောင်းဆရာတော်ထံ လျှောက်ထားပြီးနောက် ကျေးရွာသားများ စုပေါင်းကာ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉ ရက်နေ့ ည ၈ နာရီမှာ အားချင်း အလှူဝတ်လှည့်ကာ ၂၀ ရက်နေ့မှာ အလှူကြီးကျင်းပပေးခဲ့ပါတယ်။ အခုလို မရှိတဲ့သူကို လှူချင်တဲ့ ဆန္ဒပြည့်သွားအောင် ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြတဲ့ ရွာကလူတွေအားလုံးရဲ့ စိတ်ဓာတ်ကတော့ လေးစားစရာပါ … ။
အမေကြီး ဒေါ်စိန်တင့်က စိတ်ကျန်းမာရေး အနည်းငယ်မကောင်းသူ တစ်ဦးဖြစ်ပြီး အဲဒီနေ့ အလှူပွဲအပြီး ရလာတဲ့ ငွေတစ်ချိ့ကိုလည်း ကျေးရွာထဲမှာရှိတဲ့ ကလေးတွေအတွက် အဟာရဒါန အဖြစ် ပြန်လည်လို့ လှူဒါန်းပေးခဲ့ပါသေးတယ် …. ။
စိတ်ကျန်းမာရေးအနည်းငယ်ချို့ယွင်းနေပေမယ့် စိတ်ထားမြင့်မြတ်လှတဲ့ အမေကြီး ကျန်းမာပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်… ပရိသတ်ကြီးတို့လည်း ဆုတောင်းပေးခဲ့ကြပါအုံးနော်..
စိတျကနျြးမားရေး မကောငျးပငျမဲ့ ငှေ ရထောငျနဲ့ မွေးဖွဈသူကို ရှငျပွုပေးခဲ့ အဖှား
သားယောကျကြားလေးတှေ မှေးဖှားထားကွတဲ့ အမတှေေ အဘှားတှအေတှကျ သူတို့ကို ရှငျပွုရဟနျးခံပေးလိုကွပါတယျ….ဒါပမေဲ့ တခြို့က မတတျနိုငျတာကွောငျ့ ရှိတဲ့ပိုကျဆံလေးတှေ စုပွီး တဈနကေ့ရြငျ ငါ့သား ငါ့မွေးကို ရှငျပွုပေးရမယျဆိုတဲ့ မိဘတှေ အဘိုးအဘှားတှေ ရှိပါတယျ…
ခုဖျောပွခငျြတာက လကျထဲမှာ ပိုကျဆံ ၇၀၀၀ တညျးသာရှိပမေဲ့ ခဈြရတဲ့ မွေးလေးကို အဲဒီ မရှိမဲ့ရှိမဲ့ ငှလေေးနဲ့ ရှငျပွုပေးခဲ့တဲ့ အဘှားတဈယောကျရဲ့ ခဈြခွငျးမတ်ေတာအကွောငျးလေးဖွဈပါတယျ …. ။
တောငျငူမွို့နယျ၊ ကငျးဆိပျအုပျစု ၊ ဖိုးနီဆိပျကြေးရှာမှာ ပွီးခဲ့တဲ့ ဖဖေျောဝါရီ ၂၀ ရကျနကေ့ အသကျ ၅၇ နှဈအရှယျ ဒျေါစိနျတငျ့ ဆိုတဲ့ မုဆိုးမတဈယောကျက မွေးဖွဈသူလေးကို ငှကေပျြ ရဝဝဝ နဲ့အတူ သင်ျကနျး ၁ စုံ၊ ပုတီး ၁ ကုံး ၊ သပိတျ ၁ လုံးကို ယူလာပွီး ကြေးရှာ ရာအိမျမှူးထံသို့ လာရောကျကာ သူ့မွေးလေးအတှကျ ရှငျပွုခငျြကွောငျး ပွောကွားလာတယျလို့ သိရပါတယျ…။
အဲတာကွောငျ့ ရှာလူကွီးမှတဆငျ့ ကြေးရှာသားမြားစုပေါငျးပွီး ရှငျပွုအလှူတျောမင်ျဂလာပှဲ ကငျြးပခဲ့ပါတယျ … ။
ရှာလူကွီးက ရှာဦးကြောငျးဆရာတျောထံ လြှောကျထားပွီးနောကျ ကြေးရှာသားမြား စုပေါငျးကာ ဖဖေျောဝါရီ ၁၉ ရကျနေ့ ည ၈ နာရီမှာ အားခငျြး အလှူဝတျလှညျ့ကာ ၂၀ ရကျနမှေ့ာ အလှူကွီးကငျြးပပေးခဲ့ပါတယျ။ အခုလို မရှိတဲ့သူကို လှူခငျြတဲ့ ဆန်ဒပွညျ့သှားအောငျ ဝိုငျးဝနျးကူညီပေးကွတဲ့ ရှာကလူတှအေားလုံးရဲ့ စိတျဓာတျကတော့ လေးစားစရာပါ … ။
အမကွေီး ဒျေါစိနျတငျ့က စိတျကနျြးမာရေး အနညျးငယျမကောငျးသူ တဈဦးဖွဈပွီး အဲဒီနေ့ အလှူပှဲအပွီး ရလာတဲ့ ငှတေဈခြိ့ကိုလညျး ကြေးရှာထဲမှာရှိတဲ့ ကလေးတှအေတှကျ အဟာရဒါန အဖွဈ ပွနျလညျလို့ လှူဒါနျးပေးခဲ့ပါသေးတယျ …. ။
စိတျကနျြးမာရေးအနညျးငယျခြို့ယှငျးနပေမေယျ့ စိတျထားမွငျ့မွတျလှတဲ့ အမကွေီး ကနျြးမာပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ… ပရိသတျကွီးတို့လညျး ဆုတောငျးပေးခဲ့ကွပါအုံးနျော..